Xulka Qatar oo Doonaya in Xilka tababare ay u Magacaabaan Arsene Wenger – Gool FM
Xulka Qatar oo Doonaya in Xilka tababare ay u Magacaabaan Arsene Wenger
CR Shariif January 8, 2019
( Qatar ) 08 Jan 2019. Martigaliyaasha koobka adduunka 2022 ee Qatar ayaa ku dhaw in Arsene Wenger ay u magacaaban xilka tababare ee xulka qaranka, sida wararku ay sheegayaan.
Hogaamiyaha reer France ayaa bilaa shaqaa tan iyo markii uu ka dhaqaaqay Arsenal sanadkii hore.
Kaddib 22-sano uu maamulayay Gunners, Wenger ayaa ka tagay Arsenal bishii May ee sanadkii hore laakiin taa badalkee ma uusan wajahin inuu gabi ahaanba ka fariisto howlaha macalinimo.
Sida ay warineyso France Football iminka martigaliyaasha 2022 koobka adduunka ee Qatar ayaa qarka u saaran in 67-jirkaan reer French ay u dhiibaan xilka tababare ee xulka qaranka.
Xariira Qatari ee FA ayaa malaha ku badali doona macalinkooda haatan, kasoo ah leylihiyii hore ee kooxda da;yarta Barcelona Felix Sanchez, kaddib natiijooyin liita uu la yimid sanadihii lasoo dhaafay.
Qatar waxay ku hareen 2017 tartanka Gulf Cup heerka group-ka, inkastoo ay ku guuleysteen tartankii ka horreeyay, ka hor inta aysan ku fashilmin iney usoo baxaan sanadkii tagay koobka adduunka ee lagu qabtay dalka Russia.
Wenger ayaa hore u sheegay inuu helay dalabyo badan oo ay kooxaha usoo gubdiyeen tan iyo markii uu ka tagay Arsenal.
CEEBEY TACAAL: Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa ka Goolal Badan Real Madrid xilli cayaareedkan horyaalka La liga
Barcelona oo ka hadashay mustaqbalka Philippe Coutinho ee garoonka Cump Nou